Misy mahasamihafa ny bisikileta triathlon ve? - Hitaingina Bisikileta
Tena > Hitaingina Bisikileta > Bisikileta Triathlon - boky torolalana feno
Bisikileta Triathlon - boky torolalana feno
Misy mahasamihafa ny bisikileta triathlon ve?
Ny malaza indrindrafahasamihafanadia ny endriny, na ny géometry ny endriny tsirairaybisikileta.Bisikileta Triathlonmanana zoro steeper ny seza. Ny zoro maranitra dia mamela ny mpampiasa handeha amin'ny hafainganam-pandeha haingana kokoa satria afaka miondrika ambany kokoa ny vatanao izay mampihena ny fanoherana ny rivotra.8 Jul 2020
Ny fahasamihafana lehibe indrindra eo amin'ny bisikileta amin'ny hazakazaka sy ny bisikileta tri-dia mazava ho azy fa ny farany aloha. (whoosh) Sahabo ho 90 degre amin'ny bisikileta tri izany. (whoosh) (mozika mahery vaika) (whoosh) Salama, Traniacs dia avy eo amin'ny Alter Ego Sports, fivarotana bisikileta tianao indrindra, fivarotana bisikileta tiako indrindra, izay rehetra ao amin'ny fivarotana bisikileta ankafizin'i Winnipeg.
Ny sakaizantsika James etsy amin'ny Alter Ego dia manana bisikileta vaovao mafana naoriny. Manana tratra roa izy, manana bisikileta amin'ny hazakazaka izy. Ny hataontsika dia, heveriko fa hasiako mifanila amin'izy ireo, eo aloha sy any aoriana, any aoriana sy any ambony, ambony, ambony ambony, sisiny ambony, ary hasehonay anao ny fahasamihafana rehetra eo amin'ny bisikileta sy bisikileta tri. (mozika mavitrika) Eto isika dia manana Cervelo S5 amin'ity taona ity miaraka amin'ny frein disc.
Avy eo miverina eto, eny, tiako ny milaza fa Cervelo P3 amin'ny taona vaovao io, ilay maodely vaovaon'ny bisikiletako. Ankehitriny ireo bisikileta roa ireo dia tena mifanakaiky amin'ilay maodely mitovy amin'ny resaka spec, frame ary ny vidiny, ankoatran'ny triathlon, arabe. Betsaka ny olona tonga amin'ny triathlon, manana fiaingan'ny bisikileta an-tendrombohitra na fiaingan'ny bisikileta an-dàlana izy ireo.
Tsy dia maro ny olona manana bisikileta triathlon. Ka ny eritreritra dia ahoana no ahazoan'izy ireo ity bisikileta efa ananan'izy ireo amin'ny triathlon ity? Manao an'io ve ianao? Marina tokoa. Atsipazo ny barany aero roa, mahazo toerana tsara ianao ary afaka mahazo ny taona voalohany amin'ny triathlon amin'ny bisikileta iray ihany, na inona na inona bisikileta anananao. Raha miditra amin'ny triathlon ianao, mirotsaha ary miomàna, mafy orina fampiasam-bola hanaovana izany, dia tsara raha mividy bisikileta misy triathlon satria tsara kokoa noho izany ny ahafahanao mandeha tsara aorian'ny bisikileta.
Andao ho tonga amin'izany. Ny fahasamihafana lehibe indrindra misy eo amin'ny bisikileta amin'ny hazakazaka sy ny bisikileta triatra dia ny kodiarana aloha. Amin'ny bisikileta mihazakazaka dia manana freins ianao, ny levers gear, eto an-tampon-tanan'akanjo rehetra ianao no ahafahanao miasa azy ireo nefa tsy mihetsika ny tananao.
Mety te-hidina amin'ny vongan-drano ianao, fa na dia avy amin'ny rano mitete aza dia afaka mijanona. Azo antoka kokoa, azo antoka ny mitaingina fonosana, izay misy santimetatra eo alohanao fotsiny ny olona ary eo anilanao. Mila mahay mivezivezy ianao ary mitantana (mikatso) ny bisikileta anaty jiffy.
Amin'ny bisikileta tri, manana ny levers shift fotsiny ianao rehefa midina amin'ny toeran'ny aero. Mila apetrakao amin'ny fivezivezena ny handover anao mba handehananao sy hivoahanao. Ny antony mety amin'ny bisikileta tri-dia satria ny olona eo alohanao dia lavitra be ny bus.
Midika koa izany fa ny bisikileta tri-dia tsy dia azo antoka loatra amin'ny fitsangatsanganana ataon'ny vondrona. Ka raha miaraka amina mpitaingin-tsoavaly ohatra ianao, dia tena misy ny vintana mety tsy hampidirin'izy ireo anao ao anaty fonosana miaraka amina bisikileta tri satria tsy ho mailaka sy mailaka toa an'io bisikilety io ianao. Izay omen'ireo tantely aero anao dia hamela anao hametaka ny lohanao tsara sy tery.
Ny faran'ny bisikileta triathlon dia matetika no azo ovaina kokoa noho ny amin'ny tendrony alohan'ny bisikileta fifaninanana. Afaka mivoaka sy mivoaka ianao. Azonao atao ny miakatra ary azonao atao ny manamboatra ny zoro eo am-pelatanana; Rehefa mifatotra amina setrin'ny akany aero amin'ny bisikileta ianao, dia tsy manana ireo safidy fanitsiana rehetra ahafahanao mahazo ny toerana marina azonao ijanonana mandritra ny ora maro.
Tena zava-dehibe izany satria ny 80% n'ny dragona ateraky ny rivotra mandroso ny volanao dia vokatry ny tenanao. Arakaraka ny hijanonanao amin'ny toeran'ny aero no hahalalanao haingana kokoa. Tri-bisikileta matetika dia manana lasely fisarahana-orona satria miondrika ianao ary hafa tanteraka ny zoro.
Saika fisaka foana ny lasely bisikileta. Tsy dia te hampiasa lasely orona misaraka amin'ny bisikileta mihazakazaka ianao. Ireo singa, ny cranks, ny rojo vy, ny rojo, ny freins, izy ireo dia mitovy ihany, manomboka amin'ny Tribike ka hatramin'ny bisikileta.
Tsy misy mahasamihafa azy. Toy ny kodiarana sy ny endriny ihany. Aiza ny zavatra manomboka tena tsy mitovy amin'ny bisikileta tri-bisikileta ary ny môtô fifaninanana amin'ny haitao.
Natao bisikileta tri iray mba handrosoanao lavitra kokoa ary hihemotra kely kokoa ny tongotrao, ka hisokatra ny zoro hip. Amin'ny bisikileta amin'ny hazakazaka, etsy ankilany, mahitsy kokoa ianao. Noho izany dia hitanao fa ny paozin'ny seza sy ny lasely ny Tribike dia mandroso lavitra kokoa, ambonin'ny bracket ambany.
Na dia miverina lavitra aza ny bisikilety satria mahitsy kokoa ianao. Azonao atao ihany koa ny mahita fa ny bisikileta tri-bisikileta dia eo amin'ny tany ihany. Na dia mipoitra kely aza ny bisikileta mitaingina anao dia hitondra anao hatrany lavitra.
Ny sakaizako James tsara eto Alter Ego dia mampiasa an'io mba hanehoana ny tsy fitovizan'ny bisikileta eo amin'ny bisikileta. Sahabo ho 90 degre amin'ny Tribike. Mitovy bebe kokoa amin'ny 80 degre amin'ny bisikilety.
Fa maninona Amin'ny bisikileta tri dia tianao ny hisokafan'ny valahanao kokoa satria izany dia mampihena ny glute sy ny tadinao ka mbola afaka mahazo aina kokoa amin'ny bisikileta ianao. Rehefa tena mahery setra amin'ny aero ianao? Bisikileta, ary manomboka mieritreritra lalina ianao dia hiezaka ny hanana aero eo am-baravarana apetrako. Tena handoro ny glutes sy ny tadinao izany raha tsy triathlete matihanina ianao.
Amin'ity tranga ity dia freak voajanahary ianao, malefaka kokoa ianao, matanjaka kokoa ianao, afaka miala amin'izany. Ho antsika olombelona tsotra fotsiny dia mila valahana tsara sy malalaka isika. Ny zavatra sasany izay ho hafa ihany koa dia ny zavatra toy ny fijanonan'ny seza.
Azonao atao ny mahita izany amin'ny bisikileta amin'ny hazakazaka, boribory somary kely ny halehiben'ny rantsantanana kely. Mandeha fiara mandritra ny ora maro ianao ary mila famelan-keloka bebe kokoa ao aoriana mba tsy ho reraky ny hipetraka eo amin'ny seza ianao. Raha trangam-pitsarana dia mitovy amin'ny antsy.
Mivelatra io, tery izy io. Ny ataonao dia mandeha lava mahitsy ary tsy mila famelan-keloka firy. Satria mazàna ianao dia kely kokoa amin'ny scenario voafehy.
Manaova paositra amin'ny tri -Bike, matetika izy ireo lava sy manify mba hitazonana azy ireo aerodynamic, raha ny poste amin'ny bisikileta an-dalambe kosa, wow, amin'ity tranga ity dia lava sy manify izy ireo nefa matetika miendrika boribory kokoa. Ireo zavatra hafa izay mazàna dia mazàna amin'ny trondro matetika. Ireo izay tsy misy amin'ity maodely manokana ity dia ireo faritra misy sakafo mahavelona eto ambany ao amin'ny efitrano, na manana boatin-tsakafo any ambadiky ny headset, takona amin'ny rivotra. Ireto ny sasany amin'ireo fahasamihafana misy eo amin'ny bisikileta amin'ny lalana sy bisikileta tri.
Afaka mampiasa bisikileta tri ve ianao amin'ny làlana? Ie. Tsy rehefa mihazakazaka ianao. Tsia, raha mitondra vondrona izay mitondra tena mahery setra ianao ary mila mailaka.
faritra zotram-po amin'ny bisikileta
Azonao atao ve ny manao triathlon amin'ny bisikileta amin'ny alàlan'ny famelezana setrin'ny kofehy aero? Ie. Fa na dia mitondra fiara lava aza ianao. Aza mampiasa vola raha vonona ianao.
Tsia, raha te ho haingana indrindra ianao. Izany no mahatonga azy rehetra misy satria izy ireo manokana amin'ny karazana fiara, lalana na triathlon izay nanaovana azy ireo. Ny zavatra hatolotro anao, raha manana bisikileta ianao dia atombohy amina bara aero ary ampiasao ireo mandra-pahatokanao antoka fa vonona hampiasa vola dolara an'arivony amin'ny triathlon ianao ary avy eo mandroso amin'ny fiakarana bisikileta amin'ny arabe.
Afaka mila bisikileta bebe kokoa foana ianao. Ny bisikileta no tsara indrindra. Ankehitriny dia homeko an'i Alter Ego ny karamako. (mozika mavitrika) nahafinaritra izany, mora vidy aho.
Hose roa fotsiny. Mahafinaritra ny mandehandeha miresaka momba ny bisikileta, mitaingina bisikileta, mandeha bisikileta, manodidina ny bisikileta, mividy vokatra bisikileta ary tsy mandrora ny endrik'izao tontolo izao, efa hatramin'ny omaly aho no nandao ny birao toy ny hoe mandeha bisikileta eo akaikin'i Noa sambofiara. Ho fitsangatsanganana an-trano ity.
Zahao hahitanao azy. Ho tsara izany. Mandeha ianao? Mitaingina aho.
Herinandro voalohany amin'ny bisikileta. - Neny, avia haka ahy. Herinandro voalohany amin'ny bisikileta, tsara.
Eny, tampoka tanteraka amin'ny tarehy. Androany maraina dia nitondra fiara niaraka tamin'ny tarika aho, nihinana ny làlan'i Headingley ary naka fotaka kely kely tamin'ny nifiko rehefa tonga tany an-trano. Ho an'ny mpiara-monina. (mihomehy) Ho an'ireo OG rehetra efa nisy hatramin'ny ela.
Tadidinao ve ny fihinanana hazakazaka? Izany no nanombohan'ny triathlon Taren. Raha mividy ny ampahan'ny triathlon bisikileta farany an-tserasera ianao dia tena manoro hevitra anao aho hanohana ny LBS eo an-toerana, farafaharatsiny kely, tsy mividy ny zava-drehetra amin'ny Alter Ego aho, fa mividy faritra bisikileta be dia be, vita ao daholo ny fikojakojana. . Nividy herinandro vitsivitsy lasa izay dia nibolisatra avy any am-birao ny bisikileta mpandeha satria tiako ny fahasalamana, tiako ny bisikileta bisikileta, tiako ny ego ego.
Te-hanohana izany rehetra izany aho, ary tsara ny bisikileta. Ny bisikileta dia somary fiara ihany rehefa tafiditra amin'ny bisikileta avo lenta ianao, be ny asa atao amin'ny fitazonana sy fanaingoana ireo bisikileta. fa tsy vitanao ny tenanao satria tsy manana fitaovana manokana hanaovana fivarotana bisikileta an-toerana mandritra ny taona maro ianao ary tsy nanome orinasa azy ireo, manome toky aho fa ho avy ny fotoana izay ilanao fanampiana amin'ny bisikiletanao mila ary ianao tsy ho afaka manangona fanomezana sasany.
Mitadiava fivarotana bisikileta eo an-toerana izay ahazoanao aina ary tohano izy ireo amin'izay toerana mety aminao. Vidio ny ampahany amin'izy ireo. Mividiana fanampiana ara-tsakafo avy amin'izy ireo.
bisikileta telo bypass
Avelao izy ireo hanao ny fikojakojana anao. Manomboka vlog miaraka amin'ireo mpanaraka an'izao tontolo izao mampiroborobo ny fivarotana bisikileta eo an-toerana ao amin'ny vlog. Zavatra tsotra.
Hanokatra mailaka taloha efa lany daty aho ho an'ny A Race Nutr. (Mihomehy) Taty aoriana, Traniacs.
Inona no tsy itovizany amin'ny bisikileta triathlon?
Lehibe irayfahasamihafanadia ny fomba fametrahana ny seza fotsiny. Eo amin'nybisikileta triathlon, matevina kokoa ny fantson-seza noho ny lalanabisikileta. Ny zoro amin'ny fantson-seza abisikileta triathlonmanery ny valahany hipetraka eo aloha izay manome ny mpitaingina fihenjanana kely kokoa amin'ny quadriceps sy ny tadiny.
Inona no atao hoe bisikileta tsara ho an'ny triathlon?
Ilay 8 tsara indrindraBisikileta Triathlonisaky ny Tetibola
an'ny 8. Fahatsapana B nahatanterakaBisikileta. Nahatsapa bika.com.
ny 8. Speedmax CF 7.0. Canyon canyon.com.
ny 8. E-117 Tri. Argon 18 argon18.com.
ny 8. PRfour Disc. Quintana Roo quintanarootri.com.
ny 8. Cervelo P2. $ 3,000.00.
ny 8. Cervelo P3X.
ny 8. S-Works Shiv Disc.
Ankehitriny, ny fividianana ny bisikiletanao triathlon voalohany dia mety ho dingana lehibe ho an'ny fifamoivoizana rehetra maniry, mazava ho azy fa asa goavana io raha ny vidin'ny bisikileta mety hitranga, fa tsy maintsy vakinao ny banky hanampy, eny tonga tany amin'ny tanànako tokoa aho. fivarotana bisikileta ary tonga tany amin'ireo mpamatsy vola ahy voalohany dia hojerentsika ny sasany amin'ireo bisikileta mahazatra mety ho hitanao rehefa mitady bisikileta miditra ianao ary mitady izany bisikileta vaovao izany ho anao, ary homeko vitsivitsy ianao torohevitra sy tolo-kevitra omena izay Mba hahatongavanao amin'ny triathlon dia amporisihinay foana ny mitaingina izay anananao farafaharatsiny ho an'ny triathlon voalohany anao - na dia bisikileta an-tendrombohitra fotsiny aza izany mba hitsapana ny rano alohan'ny handanianao ny vola azonao, fa rehefa manana ilay ianao lesoka izay tsy ananantsika fisalasalana? Avy eo mety te hampiasa vola amin'ny bisikileta triathlon manokana ianao izao. Izaho manokana dia manoro hevitra ahy foana ny ho tonga any amin'ny fivarotana bisikileta eo an-toerana toa an'ity - afaka mahita ny bisikileta mivantana ianao ary mety hahazo torohevitra manokana avy amin'ny mpiasa. Soa ihany fa azonao atao ny mitsambikina amin'ny sasany amin'ireo bisikileta ireo ary mizaha toetra azy ireo amin'ny habeny sy ny habeny ary alao antoka fa mifanaraka aminao tokoa izy ireo, saingy hiditra kely kely isika avy eo, saingy eto aho izao dia manana izay mety ho hitanao raha ianao na miantsena an-tserasera na tsia ao amin'ny fivarotana bisikileta eo an-toerana misy bisikileta misy eto izahay ary eto amin'ity pejy ity dia bisikileta TT na triathlon bisikileta anarray no bisikileta tena marobe raha tena tianao ilay izy amin'ny làlana miolakolaka amin'ny fiakarana mitaingina mitaingina vondrona iray aza. mitaingina mitrandraka ahy indraindray tsy eny an-dalana, fa manoro hevitra aho ny tsy hamaivaniko azy io ho mahafinaritra ny fitondran-tenanao, izany no mahatonga anao ho bisikileta voafidy ho an'ireo bisikileta mpihazakazaka madio, ka raha ianao no nolazaiko teo ary mety te handray fotsiny aho anjara amin'ny triathlon angamba indray mandeha isan-taona na amin'ny fomba ahoana no tena hanolorako tena ity karazana bisikileta ity fa tsy izy no opt opt ​​haingana indrindra, fa afaka manatsara ianao raha mametaka bara zana-tsipìka eo amin'ny kitapom-bokatra etsy ambony ary hanatsara ny aerodynamikao ary eny , Lazaiko fa re ity safidy tsara ally ho an'ny bisikileta rehefa manomboka triathlon ianao, izany no tena safidiko fony aho niditra voalohany, saingy mazava ho azy fa manana ny bisikileta triathlon natokana isika ary ireo dia misy endrika sy habe amin'ny endriny rehetra, fa amin'ny fidirana -fampivoarana ny ambaratonga dia misy zavatra vitsivitsy izay jerenao fa tokony handinika tsara mba hahazoana antoka fa mahazo ny sandan'ny vola tsara indrindra ianao.
Ireo voalohany angamba no tena zava-dehibe indrindra amiko raha ny fahitanao azy dia ny manana bisikileta mahavariana indrindra ianao, fa raha tsy mifanaraka kosa dia tsy ilaina intsony ianao na tsy dia mahazo aina farafaharatsiny ary tena manohana ny soso-kevitro hahatongavana amin'izany. fivarotana bisikileta ary zahao ny bisikileta hahazoana antoka fa mifanaraka sy mahita? Iza ny habeny mety aminao, indrindra satria marika maro no manana habe somary samy hafa habe amin'ny geometry 254 santimetatra ny marika iray dia mety tsy hitovy amin'ny 54 santimetatra eh miaraka amin'ny marika iray hafa tonga amin'izao fotoana izao izay mety ho famaritana lehibe indrindra amin'ny vidin'ny bisikileta. ary izany no fitaovana fampiasa Ankehitriny dia manana safidy roa ianao eto amin'ny fibre karbaona na aliminioma Ankehitriny raha ny hevitro dia ny fibre carbon no fahatsapana tsara indrindra eny an-dàlana, maivana izany, mamaly, io no mitaingina ny pro, fa izay mahatonga ny alimo ho somary somary bebe kokoa lafo, etsy ankilany misy zavatra mavesatra kokoa, fitaovana matanjaka kokoa io, tsy dia mora simba, ary kely Fergie Raha ny marina, be dia be ny mpitaingina bisikileta vita amin'ny aliminioma folo taona lasa izay, fa ity iray ity dia mifantoka amin'io lanja io ho an'ny segondra iray satria io dia ampiasain'ny olona marobe tokoa, dia ahiahy be any. Mahazo fanontaniana maro momba ity lanja ity aho, izay tsy dia maninona ao an-trano ary tsy dia misy fiantraikany amin'ny hafainganam-pandehantsika izany. Fotoana tena tsara ho antsika any, haingana kokoa noho ianao sy ianao, ireo izay mandeha bisikileta mavesatra kokoa miaraka ny aliminioma ary na ny frame vy aza mandeha fa mazava ho azy rehefa tonga any amin'ny havoana ianao dia hanomboka hanana lanja kely kokoa ny lanja tsy ho entiko miaraka amin'ny siansa sy ny fifandraisana misy eo amin'ny Speed ​​White sy ny aerodynamika ianao, saingy misy izany iray Fihodinana izay lasa lanja kely kokoa amin'ny havoana ny lanjany.
Ka miteny fotsiny aho hoe miaina anaty iray ve ianao? faritra be havoana tsara tarehy na ianao manana hazakazaka havoana tsara tarehy avy eo fa zavatra tadiavina sy tadidina fotsiny, fa izao kosa dia hifindra amin'ny anton-javatra iray hafa hodinihina aho ary ireo no singa amin'ny bisikileta sy ireo faritra toa ireto ny cranks, ny rojo vy ary ny cassette dia ny peratra, ny frein, ny levers sns sns ary tena niova tokoa ireo, ny fahatsapana sy ny fifalian'ny bisikileta ary ny mitaingina ary raha ny marina dia miaraka amina ambaratonga fidirana ianao matetika. bisikileta toa an'ity vondrona antonony ity izay tena tsara hanombohana. Ny hakanton'ireo singa dia afaka manova azy ireo sy mivoaka fotsiny ianao ary manatsara ny fotoana.
Mandihiza amin'ny vondrona ambony satria manova azy ireo arakaraka ny fotoana azonao atao. Ny fanontaniana apetraka amiko dia ny hoe iza amin'ireo singa, amin'ny salan'isa, no misy fiatraikany lehibe indrindra, iza amin'ireo singa tokony handanianao ny vola hanombohana, ary inona no lazaiko matetika hoe ireo ampahany? ny zavatra mihetsika toy ny cranks, ny rojo vy, ny kodiarana misy fiantraikany lehibe indrindra, ny zavatra toy ny girety na ny levers fiovan'ny frein izay afaka mijanona raha mbola miasa izy ireo dia tsy hanova ny bisikileta mafy sy ny zavatra mety ny manaraka dia ireo singa fitahirizana ity ary ity dia zava-dehibe indrindra amin'ny endrika tri izay nomena ny halavan'ny hazakaza sasany sy ny filana mitahiry solika sy tsiranoka. Ankehitriny isika dia mazàna mahita fampifangaroana feno amin'ireo tampon-doha sy bisikileta dia hanana rafitra fanadiovana tanteraka eo anelanelan'ny bara aero eto sy ny vodin-tsoroka toa ity bisikileta ity eto sy ireo faritra maro hafa hitahirizana ary ireo dia mety amin'ny endriny taona ho avy Tena mahatalanjona tokoa izy ireo ary araka ny efa nolazaiko, ireo dia mirona hiditra amin'ny sasany amin'ireo maodely ambony sy feo, saingy manomboka mahita an'ity izahay miditra amin'ny sasany amin'ireo bisikileta ambany sy ambany, toa anay manana izany amin'ny ohatra boaty bento, fa ny bisikiletanay? fa ny rakitrao dia tsy miaraka amin'ity haavon'ny fampidirana ity, aza manahy fa azonao atao ny manampy ny sasany amin'izany, aorian'izany dia manana marika toy ny profiledesign xlab izay manao vokatra azonao apetaka fotsiny avy eo izahay, manana bento kely- Box na ny rafitra hydration ho an'ny tena fihaonana izay ilain'ity fitahirizana ity ary ny teboka farany dia ny toetran'ny bisikileta ary mazava ho azy fa tsy misy ifandraisany amin'ny bisikileta vaovao toa an'io, raha mividy azy amin'ny magazay na an-tserasera ianao dia manantena fa ho anao Goes tsara fa azoko fa misy fifampiraharahana tena tsara amin'ny tanana faharoa any, fifamoivoizana hafa io no manomboka mizotra amin'ny moto taloha i Lisa fa miteny aho fa mitandrina sy mitandrina fotsiny amin'ny frame raha misy ny simba, izy ireo manana nify, triatra, na harafesina izay mety tsy tianao ny mitaingina bisikileta misy olana toy izany fa amin'ny lafiny iray hafa kosa raha mety ny endriny dia midika izany fa somary tonta ihany ireo singa ireo ary angamba? andramo ny manolo sy mijery fa mety hahazo varotra tanteraka ianao ary fantatro fa be ny namana izay naka moto efa niasa ary namadika azy ireo ho milina hazakaza-tsoavaly farany nolazaiko teo, afaka miditra sy mivoaka fotsiny ianao. ary havaozy tsara ireo singa ao aminao ary raha nankafy ny lahatsoratra androany ianao dia tsindrio fotsiny ny ankihiben-tànanao raha te hahita bebe kokoa momba ny GT ianao ary tsindrio izao tontolo izao ary misorata anarana raha te hahalala bebe kokoa momba izany ianao, inona no mahatonga ny bisikileta triathlon ho Lehibe fanazavana momba izany eto, raha te hahita ny bisikiletan'i Fraser ianao dia hitanao tamin'ny fipihana eny fotsiny
Azoko atao ve ny mampiasa bisikileta triathlon eny an-dalana?
Mandritra ny roabisikiletasy tribisikiletadia samyampiasainaao anatin'nylalanafifaninanana bisikileta, ilay manam-pahaizanabisikileta triathlonhanome anao sisiny amin'ny halavirana lavitra kokoa.Bisikiletydia noforonina tamin'ny alàlan'ny fampiononana avy any ambany ary mety amin'ny halavirana lavitra kokoa.1 Nov 2019
Fa maninona no mora be ny bisikileta triathlon?
Làlanabisikiletamarobe kokoa sy mahazo aina kokoa.Tri-bisikiletadia natao ho an'ny tanjona tokana, handeha haingana amin'ny làlana somary fisaka sy mahitsy (vitsivitsy mihodina).Noho izany, Erydiatsia (na atenavoafetra)IVA-midiho ao an-tsenabisikileta triathlon.
Fa maninona no mampiasa bisikileta TT ny triathletes?
Bisikileta fitsapana fotoanaSYbisikileta triathlondia noforonina mba ho aerodynamika araka izay azo atao, ao anatin'ny tolona mba hampihenana ny drag ary hahatonga anao haingana araka izay tratra. Matetika antsoina hoe hazakazaky ny fahamarinana, ny fitsapana fotoana dia heverin'ny maro ho endrika madiobisikiletahazakazaka.
Fa maninona ny triathletes no mampiasa bara aero?
- Lavaaero fisotroanaho an'ny hazakazaka izay fady ny famolavolana drafitra (mazàna ny halaviran'ny XL & XXL), hahafahan'izy ireo mitazona toerana mitaingina aerodinamika sy mandroso kokoa amin'ny bisikiletanao.
Mora ve ny manamboatra bisikileta triathlon?
Ny fahendrena mahazatra dia ny fandaniana kely kokoa hividianana fenobisikileta, raha mitaha amin'nytranoiray avy amin'ny frame. Marina izany amin'ny ankabeazany. Miaraka amin'ireo fifanarahana azo amin'ny frame sy singa ampiasaina maivana,tranoup frame indraindray mety ho nymora vidy kokoasafidy.24 Jan 2019
Fa maninona no lafo be ny bisikileta triathlon?
Na izany aza, nahoanabisikileta triathlontoa bebe kokoalafodia satria tsy misy tsena ambany ambany azo ataobisikileta triathlon. Ny zavatra dia, tsy misyTOYzavatra toy ny mahazatratriathletempitaingina. Raha sendra azy ireo dia bisikilety no ampiasain'izy ireo. Làlanabisikiletamarobe kokoa sy mahazo aina kokoa.
Inona no mahatonga ny bisikileta fitsapana ho bisikileta triathlon?
Ny bisikileta Triathlon sy Time Trial dia novolavolaina ho an'ny fanatanterahana, fanatsarana ny teknolojia famolavolana aerodynamika ho an'ny hafainganam-pandeha farany sy fahombiazan'ny hazakazaka. Matetika antsoina fotsiny hoe 'TT Bikes', ity sokajy manampahaizana ity dia lasa iray amin'ireo taranja mitaingina malaza indrindra eran'izao tontolo izao.
Iza amin'ny bisikileta triathlon tsara indrindra no vidiana?
Ny Cervelo P-Series dia avy aorian'ny Cervelo P3 ary natao ho an'ny triathlete 'isan'andro'. Raha oharina amin'ny Cervelo P3 izay be mpampiasa indrindra tao Kona herintaona. Ny rafitry ny bisikileta dia manana baoritra tsy mitambatra toa ny Cervelo P2 sy P3 ho fototr'izany.
Mandra-pahoviana no vita ny triathlon?
Raha tsy fantatrao, efa, triathlon afaka mitondra anao na adiny iray na mihoatra ny 15 ora hamita arakaraka ny endrika lavitra. Midika izany fa afaka mandeha eo amin'ny bisikileta ianao mandritra ny 30 minitra farafahakeliny na mety mihoatra ny 6 ora. Ny endrika roa mety hananan'ny triathlon dia ny drafitra ara-dalàna sy ny tsy fandrafetana.